Imiphumela Yosesho ye- "#NABShow" - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB Khombisa
Ikhaya » Imiphumela Yokusesha ye: #NABShow
Search Results for: #NABShow
@ I-Sula-Com Inikela I-US Debut ye-FreeSpeak Edge #AES kanye ne- #NABShowNY 2019
I-ALAMEDA, e-USA - ngo-Okthoba 3, 2019 - E-AES 2019 nase-NAB NY 2019, i-clear-Com® izokhombisa uhlelo lwayo olungenantambo lwentambo ye-inthanethi olungenantambo i-FreeSpeak Edge ™ okokuqala ngqa e-US, futhi luzokwethula nohla olubanzi Imikhiqizo esekwe ku-IP namathuluzi wokuxhumana we-intercom ochwepheshe, kufaka phakathi ukusekelwa kwe-SMPTE 2110-30. FreeSpeak Edge, isengezo sakamuva ku ...
I-2019 #NABShow - Usuku lwe-2 ukuqopha
Sawubona lapho! Siyakwamukela ku-DAY 2 we-2019 NAB Show! Sisekugcineni - njengoba ungabona kusuka kuGumbi lokuLawula eligcwele, sifanele njengenhlambi futhi silungele ukuhamba! Sine-ALOT esitolo namhlanje, ngakho-ke hlala ungene ngemvume futhi ubone ukuthi yini ...
I-2019 #NABBonisa: I-Product Spotlight: HyperDeck Extreme 8K HDR nge-Blackmagic Design
I-HyperDeck Extreme 8K HDR entsha kusuka ku-Blackmagic Design isethelwe ukuba ibe isixazululo esiphelele esilandelayo ekusakazeni kwesizukulwane esilandelayo, ukukhiqizwa bukhoma kanye nezinhlelo zokusebenza zokubonisa izedijithali. Idizayinelwe ukuxhumeka okungafaniyo, i-HyperDeck Extreme 8K HDR ingasetshenziswa njengesidlali sevidyo, irekhodi le-ISO cam, kanye / noma irekhodi elihle. Futhi, amaphuzu we-analog azovumela ukuthi amathaneli wevidiyo omdala abe ...
I-2019 #NABShow - Usuku lwe-1 ukuqopha
NAMUHLA usuku lokuqala lwe-2019 NAB Show - futhi i-EXCITEMENT LEVEL i-UNBELIEVABLE !!! Iminyango ivulekile ngokusemthethweni - kodwa mina kanye nabadlali bami bebekhona lapha ku-HOURS kakade, ukuhlela nokuqoqa NONKE izindaba ze-NAB esingakwazi! Bheka Igumbi Lokulawula? Angikwazi ukukutshela ukuthi inani le-NAB Show lisho ukuthini kimi! ...
I-2019 #NABBonisa: $ 1 Billion nokubala, i-SPROCKIT imemezela ukugcina kokuqala kokuqalisa!
Ku-2019 #NABShow: SPROCKIT, ukutholakala kwezimakethe zomhlaba wonke ukuxhuma izinkampani ezithuthuka ezimakethe ezibonakalayo ezivelele emakethe, ezokuzijabulisa kanye nezobuchwepheshe kuye kwazisa namuhla ukuthi izinkampani zayo eziguquguqukayo ziqoqele ngaphezu kwezingu-$ 1 billion, kuhlanganise no-$ 500 million emva ukujoyina i-SPROCKIT. Le milestone emangalisayo yafinyelelwa njengoba i-SPROCKIT ivule ukukhethwa kwayo kokugcina kwezinkampani zokuqalisa ezizovela ...
I-2019 #NABSibonisa i-Adobe i-Huge Creative Cloud Release!
I-2019 #NABShow: Itholakala manje! I-Adobe yamemezela ukubuyekezwa kokusebenza kwe-Adobe Creative Cloud kanye nezinqubo ezintsha zamathuluzi wevidiyo namazwi azokwenza ngcono ukusebenza kahle ekukhiqizeni kwamavidiyo okukhiqiza. I-Adobe Creative Cloud inikeze emisha kumabhayisikobho amaningi, i-TV, ukusakaza nokusakaza amaphrojekthi okufaka i-Clemency, i-Fox Sports, iThe Last Black Man eSan Francisco, iNdodana yaseNdodana, iThe ...
I-NAB Bonisa i-LIVE - 2019 Bonisa uHlelo. #NABShow @NABShow
Ukusakaza Beat ngumkhiqizi we-NAB Show LIVE, ku-NAB Show yaseLas Vegas yonyaka. Iphethwe ngo-April 6-11, i-2019, i-NAB Bonisa umhlangano omkhulu kunazo zonke emhlabeni ohlanganisa ukuguqulwa kwezindaba, ukuzijabulisa kanye nobuchwepheshe. I-NAB Bonisa i-LIVE izofaka ukusakaza okubukhoma kwezingqungquthela zokhetho zenkomfa kanye nezingxoxo ezijulile nezibukiso, abathengisi nabaholi bemboni. Okuqukethwe kuzotholakala ...
I-NAB Bonisa amaqembu: 2019 NAB Bonisa i-Party & Ngemuva-Amahora Uhlu lwezenzakalo. #NABShow @NABShow
Uma singakhulumi nge-2019 NAB Show After-Parties, sizobe sishiya inqwaba yemnandi ehambisana ne-NAB Show! Bheka ngezansi uphinde uchofoze ku-NAB Bonisa imininingwane yephathi ngolwazi oluthe xaxa, njengoba abanye beyimfihlo, ngesimemo kuphela noma banezindleko zokungena. Lolu luhlu olusebenzayo futhi olunzulu kakhulu ozoyithola! Sibuyekeza ...
Ukushayela yonke i-NAB Show Foodies: Izindawo zokudlela zase-Las Vegas! #NABShow @NABShow
Njengoba kufanele ube neminyaka eyi-21 ngisho nokuphefumula e-Las Vegas, sikhethe i-21 yamaphuzu amahle kakhulu (ezinye zazo ziyizindawo "zendawo-kuphela" izindawo, ezingahambisani nezivakashi) ukuze zithole i-grub enhle kakhulu iyatholakala! Khumbula, akuwona wonke umuntu othanda indawo yonke, kepha ngitholile isipiliyoni esiphumelelayo kuwo wonke umuntu! ...
I-2019 #NABShow ifakwe imisebenzi, Ungaphuthelwa!
I-2019 #NABBonisa, okwakubanjwe ngo-Ephreli 6th-11th, ingqungquthela enkulu kunazo zonke yomhlaba yonyaka kanye ne-expo yabachwepheshe abadala, abaphatha, futhi basakaze ukuzijabulisa kuwo wonke amapulatifomu, bayobe bephethe i-Creative Masters Series Series, kanye neSession Main Stage nezinhlelo ezikhethekile zabadali bokuqukethwe. Ukukwabelana kokuqonda okukhethekile kwezobuchwepheshe nezindlela zamanje ezibuyisela kabusha ...
I-2019 #NABBonisa: I-TVU Amanethiwekhi ethuthukisa uhlelo lwe-Inthanethi-Isekelwe, uhlelo lokudlulisela ukukhomba kuya kwividiyo ebukhoma
Ku-NAB 2019 TVU Networks, ubuchwepheshe bomhlaba wonke kanye nomholi omusha kuzixazululo ezibukhoma ze-IP, uzokwethula i-TVU G-Link, isisombululo esisekelwe ku-Intanethi sokudluliselwa okuphazamisekisa iphuzu kuya endaweni. I-TVU G-Link inikeza indlela engabizi futhi enokwethenjelwa yokufeza ukudluliswa kwekhwalithi ephakeme usebenzisa i-Inthanethi yomphakathi kuphela ukuletha ividiyo ye-HD kusuka kwenye indawo kuya kwenye nge-latency-secondency. I-G-Link ilungele izinhlelo zokusebenza ...
I-30,000 Izinyawo phezulu - Ngisendleleni eya ku- #NABShow! @NABShow
... Futhi siyahamba! Njengamanje nginezinyawo ezingamamitha angamashumi amathathu nantathu emoyeni, ngiya e "Sin City" - Las Vegas, Nevada, ye-2019 NAB Show! Njengesijwayelekile, izinga lami lokuzijabulisa ngeke lingivumele ngihlale phansi, ngakho-ke ngiqalile ukubhalisa ngenkathi ngisezindizeni! (Lokhu kufaka umkhuba, manje !!!) Kusukela "Yonke Indaba iqala lapha" (I-NAB Show Theme ...
I-All-Star NAB Bonisa i-Keynote Session ithatha imidlalo edlalayo ku-New Heights Emafwini. @NABShow #NABShow
- Abasebenzi abavela ku-CBSi, Hulu, LA Clippers, NASCAR, ne-Pac-12 Networks bembonisa ukuthi ifu, izinsizakalo zezindaba, ne-AI bambalela kanjani ukulaleli, banike abalandeli ukulawula okuningi, baphule amarekhodi okubukwa, futhi bavuselele nakho okuzayo kwezemidlalo - I-NAB Show izofaka Ingxoxo ekhethekile ye-keynote igxile ekutheni ubuchwepheshe befu buhlanza kabusha ukusakaza kwezemidlalo nokushayela ukubandakanyeka kwababukeli. Iseshini, eyenziwe yi-Amazon Web ...
I-Magewell: Ukwenza Ukuguqulwa Kuya ku-IP Okusebenzayo futhi okunganakusiza. @NABShow #NABShow
Ngonyaka odlule kwakuyisiqephu sokusebenzisa ukuthuthwa kwezindaba ezisekelwe e-IP ekukhiqizeni okubukhoma, nezinhlelo zemvelo ezizungezile ubuchwepheshe ezifana ne-NewTek yama-non-royal free-mass free ye-NDI®. Izinzuzo ezithembisiwe ze-IP zokwanda kwezimo eziguquguqukayo nezindleko zokuthungula ziye zaba yizinto zangempela kubasebenzisi abagibela ngaphakathi kwezitimela ze-IP ekuqaleni, futhi ngokuqhubekayo ukwamukelwa okuqhubekayo kuqhubeka nokukhula. Ikhono loku ...
I-2019 #NABSibonisa ukubonisa okuboniswayo: I-Plura Broadcast
I-Plura Broadcast yaziwa ngokuhlinzeka ngokuqapha okuthenjelwayo, okunemali kanye nezixazululo zokwenza isikhathi embonini yokusakaza nokukhiqiza. Kulo nyaka, i-Plura izobonisa imikhiqizo emnandi kakhulu ku-2019 NAB Show Las Vegas ... Ukufakwa komkhiqizo omusha okuhlinzekwe ngezansi: Ember +: Ember + wuhlelo lokulawula umthombo ovulekile olwenziwe yiLawo Group. Uhlelo lwe-Ember + lokulawula lu ...
2019 #NABShow 4K 4Charity Fun Fun Run!
I-4K 4Chariy Fun Fun iyaba enye yezinto eziningi "ezivela endleleni ehlanziwe" imicimbi yokuxhumana ku-2019 #NABShow. Ukushaya futhi ukuxhumana ngesikhathi esisodwa, ngenkathi kusekela imbangela enkulu, kuhle kakhulu umgomo oyinhloko kulokhu kuhamba kwe-2.49-mile ejikeleze i-Sunset Park ku-7: 30AM ngoLwesibili, ngo-Ephreli 9. I-100% yentela yokubhalisa intela yokubhalisa intela ...
Ikhasinkomba 1 of 4212345	»	102030...Last »